Sida loo habeeyo buug | Hal-abuurka khadka tooska ah
Sida loo habeeyo buug
Dunida suugaantu aad bay u ballaadhan tahay, marka ay yimaadaan goobo kuu oggolaanaya inaad buug ku daabacdo lacag yar, qorayaashu way bateen. Si kastaba ha ahaatee, qof kastaa ma yaqaan sida loo habeeyo buug wuxuuna u baahan yahay casharro, tilmaamo ama caawinta xirfadle si uu iyaga ugu sameeyo.
Iyadoo aan loo eegin haddii aad ka tirsan tahay koox kasta, maanta waxaan go'aansannay inaan ku siinno furayaasha si aad u barato habka loo habeeyo buug oo aad u ogaato waxaad u baahan tahay, iyo waxaad raadinayso, si aad u hesho faylka saxda ah. , ha ahaato madbacada ama mid ka mid ah goobaha daabacaadda buugaagta. Aan samayno?
1 Maxay muhiim u tahay in la habeeyo buug?
2 Sida loo habeeyo buug
2.1 Waa maxay barnaamijka loo isticmaalo habaynta buug
2.2 Furayaasha ugu muhiimsan
2.2.1 Nooca font ee aad isticmaali doonto
2.2.2 margin bogga
2.2.3 Bilowga cutub kasta
2.2.4 Qaab-dhismeedka la raacayo buugga
2.2.5 Isticmaalka sawirada
Maxay muhiim u tahay in la habeeyo buug?
Ka soo qaad inaad hadda qortay buuggaagii. Waxa caadiga ah waa inaad ku samaysay A4, taas oo ah, cabbirka folio. Laakiin buug ma laha cabbirkaas (ugu yaraan ma aha sheeko-yaal). Ka ugu dhow wuxuu noqon lahaa A5.
Kaliya u beddelashada dukumeentiga A5 kuma caawin doono sababtoo ah… ma ku xisaabtantay in buuggu la socdo bogag ku dheggan hal dhinac? Waxaa laga yaabaa in xadka ay dhigeen ay ka dhigayso in qaybtaas ay cunaan xarfaha. Ama ma aad xisaabtamin darfaha sare iyo hoose oo waxaa jira weedho aan kitaabka ka soo bixin.
Ma aha in la sheego ciwaanka cutubyada, kuwaas oo ka soo bixi kara bogga badhtanka ama dhammaadka cutubka oo aan bilaaban ilaa bogga xiga.
Dhammaan faahfaahintaasi waa kuwa go'aaminaya in si fiican loo dhigay, iyo in la akhriyi karo.
Sidaa darteed, waqti ku qaadashada qaabeynta waa muhiim. Maskaxda ku hay in tani ay noqon doonto dareenka aad ku samaynayso akhristaha bilowga, xitaa ka hor intaanay gelin sheekada. Haddii aan si fiican loo dhigin, waxaad mooddaa inaadan ku xisaabtamin tafaasiisha oo waxaa la abuuri karaa aragti ah in sheekadu noqon doonto mid laga cabsado.
Hadda oo aad ogtahay muhiimada qaabaynta, aynu isla markiiba u dhex galno. Taasna waa in aad ogaataa in shaqadan ay ku jiraan laba arrimood oo muhiim ah:
Dukumeentiga wax laga beddelayo.
Barnaamijka aad isticmaali doonto si aad u habayn.
Inta soo hartay furayaasha ayaa xoogaa ka sarreeya, laakiin mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa isku daraya si loo gaaro natiijada ugu fiican. Taas maskaxda ku hay.
Waa maxay barnaamijka loo isticmaalo habaynta buug
Waxaan ku bilaabaynaa barnaamijka. Sida aad ogtahay, iyo haddii aanaan hore kuugu sheegin, waxaa jira barnaamijyo kala duwan oo qoraal ah, laakiin dhammaantood ma awoodaan inay qaabeeyaan qaab isku mid ah.
Qaar, sida Indesign, way sii socdaan, iyagoo awood u leh inay ku daraan sawirro, margins, xuduudaha, iwm. hab ka xirfad badan. Ma waxaad ula jeeddaa taasi waa tan ugu fiican? Haa iyo maya.
Barnaamijka ugu fiican ee qaabaynta waa ka aad ku dareemayso wanaag. Waxay noqon kartaa Indesign, ama waxay noqon kartaa wax fudud sida Microsoft Word.
Xitaa waxaad isticmaali kartaa qalabka internetka si aad u sameyso (inkastoo aanan ku talineynin sababtoo ah waxay ku lug leedahay u gelinta shaqadaada internetka oo aanad garanayn waxay ku samayn karaan).
Furayaasha ugu muhiimsan
Barnaamij kasta oo aad doorato, buug kasta waxaad u baahan doontaa inaad fiiro gaar ah u yeelato faahfaahinta qaarkood. Kuwani waa:
Nooca font ee aad isticmaali doonto
Taasi waa, xarfaha noocee ah ayaad u rabtaa buuggaaga. Halkan waxa ay ku xidhnaan doontaa ilaa xad nooca buug ee aad u qaabaynayso sababtoo ah buuga caruurtu la mid maaha buuga sheeko ee dadka waaweyn.
Dabcan, waa inaadan isticmaalin noocyada kala duwan ee xarfaha gudaha (ama dibadda, taas oo ah, daboolka hore iyo dambe). Ugu badnaan saddex ayaa lagula talinayaa (laba waa ku habboon tahay).
Ma ogtahay in marginka bogga midig uusan la mid ahayn kan bidixda? Haddii aad eegto qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka kasta, waxaad arki doontaa in dhinaca midigta ee xadka bidix uu ka weyn yahay dhinaca bidixna uu yahay midig.
Waxaan u qaadaneynaa in aad heshay fikradda sababta oo ah sida ay u badbaadiyaan xaqiiqda ah in buugaagta, marka la furo, aysan samaynin 100% waxayna hubiyaan in wax walba si fiican u dhexgalaan.
Ha iloobin kuwa sare iyo kuwa hoose midkoodna, gaar ahaan haddii aad dhigayso tirada boggaga ama madaxa. Midda dambe, magaca sheekada iyo/ama qoraaga inta badan waa la dhejiyaa.
Bilowga cutub kasta
Taasi waa, haddii aad rabto in cutubyada oo dhan ay had iyo jeer ku bilowdaan isla bog (sida caadiga ah waxay ku taal bog aan caadi ahayn) hubaal dhammaan cutubyada dhamaadka ma aha inay si fiican u dhammaadaan si ka xiga uu u bilaabo mid cusub, sax?
Taasi waxay tusinaysaa inaad samaysid bog jabin laakiin, markaad sameyso, lambarintu waxay ka soo baxaysaa boggaas bannaan, waana wax ay tahay in la saaro.
Hadda, waxa jira madbacadaha iyo buugaag iskood isu daabacay oo aan sidan samayn, cutubyaduna ha ku bilowdaan bog cusub balse aan dheg loo dhigin in ay khayaali tahay iyo in kale (yacni bidix ama midig ee akhristuhu). (hore ama dhabarka bogga) Ma ka fiican tahay ama ka xun tahay, waxay leedahay faa'iidooyinkeeda iyo waxyeelladeeda, go'aanka adigaa iska leh.
Qaab-dhismeedka la raacayo buugga
Buuggu wuxuu ka koobnaan karaa bogga xogta macluumaadka (buug, ISBN, dhigaal sharci ah...) iyo sidoo kale mahad-naq, dadaal, horudhac, cutubyo, erey-bixin, qaamuus... la dhigay. Dhab ahaantii, qaab-dhismeed ayaa la raacayaa oo ku caan ah dhammaan buugaagta.
Taasna waa inaad ku haysataa buuggaaga si ay u muuqato mid wanaagsan.
Waxaa jira waqtiyo, si loo muujiyo cutubyada, sawirada la dhigo. Laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa kiis wakhtigu boodboodo, halkii uu ka ahaan lahaa xariiq toosan, sidoo kale wuxuu leeyahay sawir ama xuduud.
Kuwan waa in la geliyo oo lagu hagaajiyaa meesha saxda ah si looga hortago inuu dhaqaaqo marka dukumeentigu kaydiyo (qaab kasta ha ahaadee).
Intaa waxaa dheer, waa inay lahaataa tayada ugu yar si, marka ay timaado daabacaadda, waxay u egtahay mid wanaagsan oo aan la saarin.
Sida aad arki karto, dhigista buug ma aha mid adag, inkastoo ay qaadan karto 1-2 maalmood marka la eego buugaagta aan sawirada lahayn; ama usbuuc aad haysato sawirro (ama ka badan). Weligaa ma qabatay shaqadaas? Ma aragtaa wax kale oo ay tahay in lagu xisaabtamo?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Sida loo habeeyo buug